Si buuxda line Production maaskaro Automatic
Fiber Laser Calaamadaynta
La asaasay 2008
12 sano waayo-aragnimo
In ka badan 18 alaabta
mishiinka laser Fiber sixitaanka Portable Well soo saaray Maqaallo matoor 1. tayada sare ee fiber, kaalinta tayo fiican leh, indhaha uniform cufnaanta awoodda, wax soo saarka deggan awood indhaha, la kulmo baahida dalabka suuqa caadiga ah; 2. RayFa is-horumariyo scanner digital-xawaaraha sare galvanometer, size yar yar, xawaaraha sare iyo xasillooni aad u wanaagsan; waxqabadka gaaro heerka sare ee caalamiga ah, 3. nidaamka gacanta awood leh, optimizes xogta ka baaraandegidda sida ay codsiga kala duwan, taageerada m ...
Well soo saaray Desktop Fiber mashiinka sixitaanka laser Maqaallo matoor 1. tayada sare ee fiber, kaalinta tayo fiican leh, indhaha uniform cufnaanta awoodda, wax soo saarka deggan awood indhaha, la kulmo baahida dalabka suuqa caadiga ah; 2. RayFa is-horumariyo scanner digital-xawaaraha sare galvanometer, size yar yar, xawaaraha sare iyo xasillooni aad u wanaagsan; waxqabadka gaaro heerka sare ee caalamiga ah, 3. nidaamka gacanta awood leh, optimizes xogta ka baaraandegidda sida ay codsiga kala duwan, mu taageero ...
Desktop CO2 Laser sumadda ...
CO2 laser goynta MAKIINADDA
Well soo saaray CO2 Laser mashiinka cut laser wax xardha 1390 qoryo MDF Laser jarida mashiinka la isticimaalo ka buuxa gacanta barnaamijyada computer oo gacanta tiro gacanta mooshin farsamo, si goynta in uu yahay sax iyo saamaynta processing la wanaajiyey ee baahida macaamiisha ee. Annagu waxaannu u adeegi macaamiisheena sida ay baahidooda, sidaas darteed waxaan dooran design software ugu fiican, qaab-dhismeedka farsamo, qaybaha elektaroonik ah iyo qaybo ka mid doorashada si ay u dhawraan xasiloonida, sax iyo xawaaraha fasalka ugu horeysay ...
Xararad Fiber Laser w ...
Xararad fiber laser mashiinka alxanka l Xararad ...
Well soo saaray duulaya Fiber laser sixitaanka machin ...
Dayuurada marki CO2 Laser ...
Well soo saaray Desktop Fiber laser sixitaanka Maakii ...
Well soo saaray CO2 Laser mashiinka cut engra laser ...
Xintang Community, Houjie Town Dongguan CITY, Gobolka Guangdong, Shiinaha